သီးနှံထွက်ကုန်များ စစ်ဆေးရေးဓါတ်ခွဲခန်း – PPD Myanmar
စိုက်ပျိုးသီးနှံထွက်ကုန်များ အရည်အသွေးပြည့်မှီ၍ ဘေးဥပါဒ်ကင်းရှင်းရေး ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးပေးရန်။
မြန်မာနိုင်ငံ စားသောက်ကုန်စံချိန်စံညွှန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးနှင့် ဓါတ်ကြွင်းထိန်းချုပ်မှုများ၊ မှိုဆိပ်ထိန်းချုပ်မှုများ၊ အဆိပ်သင့်သတ္တုဓါတ်များ ထိန်းချုပ်မှုများအတွက် အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်။
စိုက်ပျိုးသီးနှံ ထွက်ကုန်များ တင်ပို့ရောင်းချခြင်း၊ တင်သွင်း ဖြန့်ဖြူးခြင်းတွင် ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေး ထောက်ခံချက်များ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်။
စိုက်ပျိုးသီးနှံထွက်ကုန်များ၏ အရည်အသွေးအာမခံချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များအား နည်းပညာအားဖြင့် အထောက်အပံ့ပေးနိုင်ရန်။
သီးနှံထွက်ကုန်များ စစ်ဆေးရေးဓါတ်ခွဲခန်း မှ လက်ရှိဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသောလုပ်ငန်းဆောင်တာ များ
စျေးကွက်အတွင်း စံ မညီ စိုက်ပျိုးသီးနှံထွက်ကုန်များ နှင့် စားသုံးဆီများ ပပျောက်ရေး အတွက်အခြားဝန်ကြီး ဌာနများ၊ ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အရည်အသွေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များတွင် ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နေခြင်း။
စိုက်ပျိုးသီးနှံများနှင့် စားသုံးဆီများဓါတ်ခွဲရာတွင် ဘေးဥပါဒ်ကင်းမှု Food Safety Parameters များ၊ အရောအနှော Identification Parameters များ၊ အရည်အသွေးဆိုင်ရာ Quality Parameters များ စစ်ဆေးခြင်း စသော ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်မှု အမျိုးအစား ပေါင်း (၂၁) မျိုး အားတိုင်းတာ စစ်ဆေးပေးနေခြင်း။
နိုင်ငံတကာ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ အဆင့်အတန်း စံချိန်စံညွှန်းများအတိုင်း ဘေးအန္တရာယ်ကင်းသော ပြည်တွင်း စိုက်ပျိုးသီးနှံများထုတ်လုပ်နိုင်ရေးကိုဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးပေးခြင်းအားဖြင့်ချမှတ် အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေခြင်း။
ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်မှု အမျိုးအစားပေါင်း (၂၁) မျိုး ၏ ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ခများ
ဓါတ်ခွဲခန်း၏ စွမ်းဆောင်ရည် စွမ်းအားနှင့် လက်ရှိ တိုင်းတာနေသော နည်းပညာများ
ဘေးအန္တရာယ်ကင်းသော အစားအစာများစားသုံးနိုင်ရေး၊ တင်ပို.ရောင်းချနိုင်ရေးအတွက်ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးပေးနိုင်ရန် နိုင်ငံတကာအကူအညီများရယူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ကြို့ကုန်း- အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်းနံပါတ်+ ၉၅၁- ၃၆၄၆၂၉၄
ပိုးမွှားကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံချက်နှင့် တင်သွင်းခွင့်ထောက်ခံချက်အတွက် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုနှုန်းထားများ၊ ပိုးသတ်ဆေးမှတ် ပုံတင်/လိုင်စင်/ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးခ/နှုန်းထားများ
သတိပြုစေချင် အဖ်လာတော်ဆင် (Aflatoxin)
အပင်နှင့်အပင်ထွက်ပစ္စည်းများ နှင့် ပိုးသတ်ဆေးများတင်သွင်းမှုအတွက် အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနနှင့်ပတ်သက်၍ ဆက်စပ်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ ဖြေလျှော့ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ကြေညာခြင်း
မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုထားသည့်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ခြင်းခံထားရသောကြောင့် ဈေးကွက်အတွင်း ရောင်းချခွင့်မရှိ သည့် ပိုးသတ်ဆေးများစာရင်း (13.9.2020)
© 2021 PPD Myanmar. All Rights Reserved. MmHash group